सन्ध्या सापकोटा का एक दर्जन मुक्तकहरूः | पल्लव साहित्यिक ई-पत्रिका सन्ध्या सापकोटा का एक दर्जन मुक्तकहरूः – पल्लव साहित्यिक ई-पत्रिका
रक्त प्रवाह बिनाको कोमल यो मुटुलाई स्याहार गर्दैछु ।
आँसुको थोपा रित्याएर बेदनाको सागर मनमा भर्दैछु ।
मेरो जीवनको नेपथ्यमा दैवले खेल खेलिरहेता ‘पनि ,
दुई थोपा रगत साँच्दै बाँच्ने आशमा म अघि सर्दैछु ।
नदेखिए पछि घाउ औषधीले कहाँ छुन सक्छ ?
देखिपछि त यहाँ जो कोही पनि रुन सक्छ ।
अनावश्यक नसोच् मानसपटलमा असर होला,
यतिमात्रै कहाँ हो र झुकिएर ब्रेनट्युमर हुन सक्छ ।
चोखो माया लाउने मान्छे भेटिन
ओठमा हासो छाउने मान्छे भेटिन
जन्ती को साथमा बाजा बजाउदै
दुलही बनाउन आउने मान्छे भेटिन ।।
जब साँझ डाडाँको टुप्पोमा सूर्यको किरण उभिन्छ ,
सन्ध्या हुनु अगावै समयको मीठो आभास सकिन्छ ।
तर यसलाई अनर्थ ठान्ने चेस्टा नगर्नु होला महोदय ,
फेरि निशाको गर्भबाट सूर्योदयसँगै अग्राख जन्मिन्छ ।।
रोएर हुन्न कराएर हुन्न त्यसैले दुखमा मुस्कान छ ।
हातमा चोट छ, मुटुमा दर्द अनि मुखमा मुस्कान छ ।
जब आउँछ हल्लाको बतास चलेर जान्छ
सक्दैन सहन मेरो यो छाती जलेर जान्छ ।
उठ् सन्ध्या! अब जाग्नु छ हेर् अग्राख बनी,
न धमिरोले खान सक्छ न त गलेर जान्छ ।।
रुन सुरुवात भएको थियो जब बचपनमा
यसको अन्त्य कहिल्यै भएन जिवनमा ।
निर्दयी त हदैसम्म निर्दयी रहेछौं तिमी ,
अटाउन सकेनौं मलाई तिम्रो त्यो मनमा ।।
आँखा आँखा जुध्यो के कति हुन्छ होला?
दुवै नजर एउटै हुदा कति रुन्छ होला ?
टाढा हुदै मनले त्यो मनलाई छोइसकेको छ,
झन प्रत्यक्ष भेटनै हुदा कति छुन्छ होला ?
सारा संसार भुल्न सक्छु,तिमीले साथ नदिए पनि ,
काँडा बीच फूल्न सक्छु तिमीले साथ नदिए पनि ।
झुठो आश्वसन देखाएर एक्लो बनायौ त के भो र ,
पौरखमा म डुल्न सक्छु तिमीले साथ नदिए पनि !
तिमी तिरै मन एकाग्र हुने, ध्यान दिनु मलाई
हजार जुनी बाँच्छु चाहान्छु, ज्यान दिनु मलाई ।
कसरी बाँच्ने आज मन मुटु टुक्राटुक्रा हुदा ?
ए! प्रेमका पाठहरू सिक्छु, ज्ञान दिनु मलाई ।।
सन्ध्या सापकोटा ‘प्रिय नदी’
This entry was posted in कविता, टुक्रे कविता, मुक्तक and tagged Pallawa, sandhya, sapkota, पल्लव, सन्ध्या सापकोटा. Bookmark the permalink.
← उमा दाहालका केही मुक्तकहरूः